Home Wararka Booliska Gobolka Nugaal oo gacanta ku dhigay kooxo looga shakisan yahay Al...
Booliska Gobolka Nugaal oo gacanta ku dhigay kooxo looga shakisan yahay Al Shabaab
Ciidanka Booliska Gobolka Nugaal Oo Habeenkii 3-aad Howlgal Ka Sameyay Gudaha Garowe Kuna Soo Qab Qabtay Rag Looga Shakisan Yahay Kooxaha Nabadiidka Ah.
Howlgalkan oo ah mid uu hogaaminayo taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal G/sare Xussen Cali Maxamuud ayaa ujeedkiisu yahay in lagu baadi goobo kooxaha Argagixisada ah iyo kuwa ka ganacsada Mandooriyaha oo xogtooda ay hayaan ciidanka booliska.
Ciidamada ayaa sido kale baritaan ku sameynayay qaar ka mida hotelada,guryaha iyo gadiidka si loo ogaado.
Taliyaha qaybta booliska Gobolka Nugaal G/Sare Xussen Cali Maxamuud ayaa ciidamada faray inay u dhimriyaan Bulshada isagona sido kale faray ciidanka howl galka ku jira inaysan wax xabada ridin si xasilooni loo daremo.
Previous articleMarkii 7aad oo la baalmaray waqtigii lagu heshiiyay in doorashada BFS lagu soo afjaro, Maxa xigi doono?
Next articleCiidamo ka tirsan ciidanka Itoobiya oo qarax lagula eegtay duleedka Waajid
Ra’iisal Wasaare Kheyre Oo Hadyad Qaali Ah Siiyey Safiirkii Hore Ee...
FBI Mareykanka oo soo saartay digniin ka hor caleemo saarka “Joe...